Binance any India: Ny governemanta indiana dia mihevitra ny fameperana cryptocurrency fa tsy fandrarana - Cazoo
Binance any India: Ny governemanta Indiana dia handinika ny fitsipiky ny cryptocurrency fa tsy fandrarana
Home » Home » Binance any India: Ny governemanta Indiana dia handinika ny fitsipiky ny cryptocurrency fa tsy fandrarana
Famoahana sary: ​​Yogendra Singh
Toy ny ao amin'ilay lahatsoratra miresaka azy Binance any Afrika, vaovaon'izao tontolo izao mahaliana ahy: ny firenena manintona an'i India, izay tsy jeren'ny governemantany firy ny vola crypto, mety hanana eritreritra aorian'izany: ny tatitra iray vaovao dia manondro fironana matanjaka mankany amin'ny fifehezana ny vola crypto any India, fa tsy fandrarana.
Ny fieritreretana indray an'i India momba ny vola crypto
Il firenena faharoa be olona indrindra eto an-tany tsy tena te hahatakatra ny tontolon'ny crypto mihitsy izy.
Efa amin'ny taona 2018 ny Reserve Bank of India ha voarara ho an'ny orinasa rehetra miasa miaraka amin'ny fitantanan'izy ireo hiasa amin'ny fananana nomerika. Saingy lavaka tao anaty rano ilay fitarainana: roa taona taty aoriana, naverin'ny Fitsarana Tampony tao amin'ny firenena ilay fanapahan-kevitra.
Ny karana dia nampiseho fahalianana lehibe tamin'ity sehatra ity, nanohy nanasongadina ny fampidirana fandrarana ankapobeny ny manampahefana. Tamin'ny volana martsa, Nipoitra ny tatitra izay nanondro fa ny firenena dia mikasa ny hanao heloka bevava amin'ny fifandraisana amin'ny bitcoin sy ny altcoin hafa.
Mividy BITCOIN ON BINANCE, MIARAKA DISO 20%!
araka ny araka ny voalaza avy amin'ny The Times ara-toe-karena, afaka nanova ny heviny ny governemanta, manohitra ny andrim-panjakana matanjaka mitaky an'io fahafaha-manao io, ary miaraka amin'ny Fitsarana Tampony efa nanohana. Raha nanonona loharanom-baovao telo nahalala fifanakalozan-kevitra anaty izy, dia nanamarika fa ny manampahefana "dia afaka mamorona tontolon'ny manam-pahaizana vaovao hanadihady ny mety ho fifehezana ny vola crypto any India"Raha tokony handrara azy ireo.
Ny fahitan'ny sekretera teo aloha momba ny vola, Subhash Garg, izay nanoro hevitra ny governemanta tamin'ny taona 2019 mba tsy hifandray amin'ireo orinasa miasa amin'ny crypto, dia "fahitana efa lany andro" ankehitriny araka ny komity mikasa ny hamaha ity olana ity.
Fananana nomerika fa tsy vola
Ny loharanom-baovao avy amin'ny governemanta anatiny izay nitory an'io vaovao io dia nilaza fa nanova ny toerany ny minisiteran'ny vola aorian'ny fitomboan'ny volan'ny Indiana karana, izay mailo be amin'ny hetsika sy mahay mividy vola crypto.
Nandeha lavitra aza ny komity tamin'ny famakafakana satria nanapa-kevitra izy fa hiasa amin'ny fampiasana ny haitao blockchain ho an'ny "fanatsarana ny teknolojia", ary hanolotra fomba vaovao hifehezana ny vola crypto ho fananana nomerika fa tsy vola.
Ny tatitry ny komity dia misy ny fiaraha-miasa amin'ny banky foibe ho an'ny fampandrosoana sy ny fanombohana ny Rupee nomerika natolotra vao tsy ela akory izay (CBDC).
Elon Musk ao amin'ny SNL dia miresaka momba Dogecoin, ary nianjera i doge (8 Mey 2021)